Maqaalka Jason McCoy ee Martech Zone |
Maqaallada by Jason McCoy
Cod ahaan talanti ahaan, Jason McCoy wuxuu waqtigiisa intiisa badan ku qaataa qol yar oo suufan oo gadaashiisa makarafoonka kujira. Codkiisa ayaa lagu soo bandhigay mashaariicda loogu talagalay Dell, Walmart, Honda iyo kuwo kale oo badan. Wuxuu ku takhasusay codbixinta sharaxaadda iyo fiidiyowyada suuqgeynta ee internetka. Dhageyso Jason demo or akhri bartiisa tilmaamaha iyo ilaha mawduucyada laxiriira codka.
Arbacada, Oktoobar 28, 2015 Arbacada, Oktoobar 28, 2015 Jason McCoy
Markaad raadineyso inaad la shaqeyso cod ka badan farshaxanka si aad fariin ugu hayso, fiidiyowga sharraxaya, ganacsiga ama wax kasta oo u baahan sheekeeye khibrad leh, waxaa muhiim ah in la xusho qof leh hibada saxda ah ee baahiyahaaga gaarka ah. Cod xirfadle ah ayaa ka badan oo kaliya qof ku hadlaya ereyada qaarkood, ka dib, adigu taas waad sameyn kartaa adigu! Isticmaalka cod khibrad iyo xirfad leh oo ka sarreeya farshaxanka ayaa lagama maarmaan u ah gudbinta farriintaada